Ukuhamba kwezitimela kusuka eChina kuya eYurophu kumisiwe
Ukuhamba kwezitimela kusuka eChina kuya emngceleni weKazakhstan neMongolia kumisiwe, ngaphandle kohambo oluhleliwe. Lokhu kumiswa bekuvele kusebenza kusukela ngomhlaka-8 Disemba futhi kuze kube yimanje akuzange kunwetshwe kuze kube ngumhla ka-16 Disemba, 6 ntambama. Isizathu sokumiswa ukuminyana ngokweqile emngceleni ...
Indlela yokuthi abakhiqizi be-IVD bahambe futhi bahlale ngaphansi kwalesi sifo
Kusukela kwaqhamuka i-coronavirus entsha, i-haze isembozwe ezweni laseChina. Ubumbano lweNational People lubambisene ekuphenduleni “ubhadane” lwempi ngaphandle kwentuthu yezibhamu. Kodwa-ke, igagasi elilodwa alikalinganiswa futhi elinye seliqalile. Lesi sifo esisha ...